कुलमानलाई देश निकाला गरौं !! - DURBAR TIMES
HomeOpinionकुलमानलाई देश निकाला गरौं !!
एक समय देशमै बसेर यहाँको शिक्षाको बिकासमा योगदान गर्छु भनेर डा. श्रीरामभक्त माथेमा कम्बोडियाबाट नेपाल आए । केही वर्ष काठमाडौँमा बसेर केही शैक्षिक संस्थामा काम पनि गरे, अन्तत: केही वर्षअघि उनको चित्तदुख्दो अनि निराशाजनक अभिव्यक्ति आयो -” म हारेँ,काम गर्ने कुनै सकारात्मक वातावरण भएन । म त्यसैले गह्रौँ मन लिएर कम्बोडिया फर्कँदैछु ।”
Previous articleअमेरिकामा अक्टोबरदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप बाँड्न सकिन्छ : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
Next articleट्राफिक प्रहरीको (तपाइँको मास्क खोई ?) अभियान